အဖေဖြစ်သူ ပင်ပန်းမှာစိုးလို့ မနက်(၅)နာရီထပြီး ထောပတ်ထမင်းတွေရောင်းဖို့ ကူညီပေးနေတဲ့ ညီနန္ဒရဲ့ သမီးလေး …. – Shwe Thoon 8 Online Media
အဖေဖြစ်သူ ပင်ပန်းမှာစိုးလို့ မနက်(၅)နာရီထပြီး ထောပတ်ထမင်းတွေရောင်းဖို့ ကူညီပေးနေတဲ့ ညီနန္ဒရဲ့ သမီးလေး ….
….ဗီဒီယိုဇာတ်ကားတွေလည်း အများအပြားရိုက်ကူးခဲ့တဲ့ ညီနန္ဒကတော့ မင်းသားတစ်လက်ဖြစ်ပါတယ်နော်။ခန့်ညားပြီးယောက်ျားပီသတဲ့ ရုပ်ရည်ကလည်း နှုတ်ခမ်းနီမလေးတွေကို အသည်းစွဲဖြစ်စေခဲ့ပြီး သူ့ခေတ်သူ့အခါမှာ အောင်မြင်မှုတွေကို ရရှိခဲ့တာဖြစ်
အရမ်းကြိုက်နှစ်သက်ကြပါတယ်။ ညီနန္ဒက စီးပွားရေးကိုလည်း ကြိုးစားလုပ်ဆောင်ပြီး စိတ်စေတနာကောင်းလို့ လူချစ်လူခင်ပေါများနေတာဖြစ်ပါတယ်။အခုဆိုရင်တော့ ညီနန္ဒရဲ့ ချစ်သမီးလေးက မနက်(၅)နာရီ ထပြီး ဖေဖေ့ကိုကူညီနေတာဖြစ်ပါတယ်
။ထောပတ်ထမင်းအော်ဒါကလည်း (၈၂၈)ပွဲဖြစ်လို့ သမီးလေးက ဖေဖေ့ကို ဘေးကနေကူညီပြီး သိတတ်လိမ္မာနေတဲ့ ပုံလေးကို ချစ်ပရိသတ်ကြီးအတွက် ပြန်လည်မျှဝေပေးလိုက်ပါရစေနော်။
အရမ်းကြိုက်နှစ်သက်ကြပါတယ်။ ညီနန္ဒက စီးပွားရေးကိုလည်း ကြိုးစားလုပ်ဆောင်ပြီး စိတ်စေတနာကောင်းလို့ လူချစ်လူခင်ပေါများနေတာဖြစ်ပါတယ်။အခုဆိုရင်တော့ ညီနန္ဒရဲ့ ချစ်သမီးလေးက မနက်(၅)နာရီ ထပြီး ဖေဖေ့ကိုကူညီနေတာဖြစ်ပါတယ်။
ထောပတ်ထမင်းအော်ဒါကလည်း (၈၂၈)ပွဲဖြစ်လို့ သမီးလေးက ဖေဖေ့ကို ဘေးကနေကူညီပြီး သိတတ်လိမ္မာနေတဲ့ ပုံလေးကို ချစ်ပရိသတ်ကြီးအတွက် ပြန်လည်မျှဝေပေးလိုက်ပါရစေနော်။
← …သိန်းထီဆုကြီး ပေါက်ခဲ့တဲ့အပြင် လက်ဆောင်တွေ အများကြီးပါရခဲ့လို့ အတိုင်းမသိ ပျော်နေရှာတဲ့ မိုးဟေကို ……
ခရီးထွက်တဲ့ လမ်းတစ်လျှောက်လုံး ရေဆာတဲ့ကိစ္စနဲ့ပဲ ပြသနာတက်နေတဲ့ မင်းမော်ကွန်းကို ဝိုင်းပြောခဲ့ကြတဲ့ ထွန်းထွန်း နဲ့ ကျော်ကျော်ဗို …. →